भरतपुर अस्पतालमा बढ्दै गएको ‘असुहाउँदो’ राजनीति ! – Shasankhabar
चितवन। चितवनमा रहेको भरतपुर अस्पताल सङ्घीय स्तरको अस्पताल हो । पछिल्लो समय यस अस्पतालमा असुहाउँदो राजनीति हावी हुँदै गएको छ । महत्वपूर्ण विभागमा ठाडो हस्तक्षेपले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ भने सेरेमोनियल पदमा रहेका अध्यक्षको कार्यकारी प्रस्तुति देखिएको भन्दै अस्पतालका डाक्टरहरु असन्तुष्ट छन् ।
नयाँ स्थानमा नयाँ व्यक्ति आउँदा केही कुरा बुझ्न समय लाग्नुलाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै अध्यक्ष डा. अधिकारीले अस्पतालको विकास निर्माण र प्रशासनिक कामका लागि कुनै अलमल नहुने दावी गर्नुभयो । (उज्यालो अनलाइनबाट)